35 Responses to “ခွဲစိတ်ကုသခ”
အပြင်လောကမှာ ဖြစ်လာနိုင်ဘို့ဆိုတာတော့. အင်း.
မယ်ချောရေ...ဘကျောက်လဲ တန်ခိုးရှင်ရှိတဲ့ နိုင်ငံကို ရောက်နေလို့ အသက်မသေတာ.. ဘကျောက် ဆေးကုစားရိတ်က ဒေါ်လာ ငါးသောင်းလောက်ရှိပေမဲ့ ဘကျောက် မကုန်ပဲ တန်ခိုးရှင်က ကုပေးတာ....၊ ရွာမှသာဆို ခုလောက်ဆို လောက်တက်နေလောက်ပြီ..
လူတွေ ရဲ့ အကြင်နာ တရား တွေကို ရှာဖွေနေတဲ့ ညီမ အတွက် ကျေးဇူးဘဲလို့ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်
မေတ္တာ + အကြင်နာ + ဂရုဏာ = တန်ခိုးရှင်
အဲ့လိုတန်ခိုးရှင်တွေများလေ ညီမလေးတို့ ကမ္ဘာကြီးလဲ ငြိမ်းချမ်းလေဖြစ်မှာ ချောရေ...
ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး..ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်သွားတယ်..
တစ်ခုတော့ တောင်းဆိုခွင့် ရချင်သေးတယ်...
မချောကော ကျွန်တော့ကို တန်ခိုးရှင်းတစ်ဦးလောက် ရောင်းပါနော်..
ညတွေ ပျောက်ဆုံးနေလို့ပါ...(အဲဒီညတွေ ပြန်လိုချင်တယ်)
အဲဒီလိုတန်ခိုးရှင်တွေ မြန်မာပြည်အတွက်လဲ လိုချင်ပါတယ် ချောရေ ...
တယောက်ထဲဆိုရင် လောက်မှာမဟုတ်လို့ ... အများကြီးလိုချင်တယ်။
မချောရေ... လောကမှာ ဒီလို စိတ်စေတနာ ကောင်းတဲ့ ဆရာဝန် တန်ခိုးရှင်တွေ အများကြီးရှိရင် အရမ်းကောင်းမှာပါပဲ... တကယ် အရေးကြီးတာက ငွေကြေး မဟုတ်ပါဘူး။ သူများကို စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ကူညီတာကမှ တကယ်ကို မြတ်တာပါပဲ ဆိုတာ သိကြရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိမ့်မလဲနော်... :)
ဆရာမရေ ကျွန်တော်က တန်ခိုးရှင်ရှာချင်တာထက် တန်ခိုးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲလိုမျိုးဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အားပေးပါတယ် မင်းခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကလည်း တန်ခိုးရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဖန်ဆင်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူတွေကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းရှေ့နေလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်လိုက်တော့ ပိုသေချာသွားတယ်
အမရေ ဒီပို့စ်လေးကို သဘောကျတယ် သိပ်ကောင်းတယ်နော်...
ညီမချောရဲ့ ပိုစ်ကို ဖတ်ပြီး စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းတဲ့လူတွေ ပိုများလာမယ် ထင်တယ်နော်။ စာပေနဲ့ လောကကို အလှဆင်တာ ၀မ်းသာစရာပါ။
ဖော်ဝပ်မေးလ်မှာ ဖတ်ဖူးတယ် ညီမချော၊ နှလုံးသား ရှိပြီး စွမ်းနိူင်သူတွေဟာ အကြင်နာတရားလည်း လိုသေးတာနော်...
မောင်ငယ်လေးရဲ့ ကုသိုလ်ကံကြောင့်ရယ် သမီးလေးရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ ကြင်နာနားလည်ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့်ရယ် မင်္ဂလာရှိတဲ့ ဘ၀လေးတခု အဖြစ်အပျက်လေးတခုဖြစ်ခဲ့တာပဲနေမယ်ဗျာ
လေယာဉ်လက်မှတ်လိုချင်လို့ပါ။ တကယ့်ကိုစိတ်ထဲကနေတမ်းတမ်းတတလိုချင်မိတာပါ။ သူလာရင်စကား
အဲလိုစာတွေလိုက်ဖတ်မိတိုင်း။ အပေါ်က တန်ခိုးရှင်ကို အမြင် ကတ်ကတ်လာတယ်။ (ဘာလဲမသိ)
ဒေါက်တာ ကာတန်အမ်းစ်ထရောင်း လိုတန်ခိုးရှင်းမျိုး ရှမ်းမလေး(မချော) တွေ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ပုသိမ်ကို လမ်းညွှန်ပေးပါဂျာ။ အင်ဒရူးလေလို လူနာတွေ ပုသိမ်ဆေးရုံကြီးမှာ အများကြီးကျန်သေးတယ်။ တစ်ချို့လည်း မီးခိုးငွေသဏ္ဍန်နဲ့ ကောင်းကင်မှာ ပျံ့လွင့်ကုန်ပါပြီဗျာ။
ကောင်းတဲ့ စေတနာ ရဲ့ ကောင်းကျိုး ရရှိစေပုံကို ပြထားတာပေါ်လွင်နေပါတယ်။
ဘာသာပြန်ထားတာလည်းချောမွေ့တဲ့ အရေးအသားဖြစ်နေပါတယ် ။
တန်ခိုးရှင်တွေ ရှိတော့ ရှိပါတယ်.. ရှားတယ်ပေါ့...
နှလုံးလှတဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ ဆုံဖြစ်လို့ ပေါ့မမရယ်။ သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုဖြည့်ပေးနိုင်တာ...
Hnin War said...
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ် လေးပါပဲ
ဟင်း တန်ခိုးရှင် တဲ့လား လိုချင်သားဘဲ ၊ တခါတခါ လက်တွေ့ဘ၀တွေနဲ့ အလှမ်းကွာလွန်းတဲ့ စာလေးတွေ ကိုဖက်ရတာ ၊ ကြည်နူးစရာကောင်းပေမဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရပ် တွေနဲ့ စုံတွေ့ရတဲ့အခါ................................................................................................................................................................xxxxxxxxxxxxxxx..............xxxxx။
တက်စ်လို ကလေးမျိုးရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ကလေးက လေးစားစရာကောင်းလှပါတယ်။
ဒေါက်တာကာတန်အမ်းစ်ထရောင်းလို ဆရာဝန်မျိုးတွေလည်း အများကြီးလိုအပ်လှပါတယ်။
ချောရေ.. ဒီပို့စ်လေးက STA နဲ့လည်းလိုက်ဖက်တာမို့ STA မှာလည်း တင်စေချင်ပါတယ်လို့..။
သနားစရာ၊ ကြည်နူးစရာလေး၊ စာကောင်းလေးတွေ ဘာသာပြန်တတ်လိုက်တာ
ဘာသာပြန် စာစုလေးကို အရောက်လာဖတ်ပါတယ်။ မမချောရေ
မမချောရဲ့ အကြင်နာ၊စေတနာ၊မေတ္တာတွေလည်း အထင်သားပေါ်လွင်နေပါတယ်။
တကယ်တော်ပြီး စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ ဆရာဝန်တွေများများ ပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ စာလေးဖတ်ပြီး ဆုတောင်းမိတယ် အစ်မချောရေ....
သိပ်ကောင်းတယ် မမရေ..အခုလိုမျိုးများ အများကြီးရှိရင် ကောင်းမယ်နော်
အတွေးထဲမှာ နစ်မျောသွားခဲ့တယ်..။ ဒါပေမဲ့...
ဆရာဝန်တွေ အတွက် တလကို တကြိမ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုသာ စေတနာ အရင်းခံပြီး ကူညီမယ်ဆို ဆရာဝန်တွေလည်း အများကြီးဆိုတော့ လူနာ တော်တော်များများလည်း စိတ်ချမ်းသာရမှာပဲ။
အင်း... စိတ်ကူးယဉ်တော့ ဆန်နေမလားဘဲ...။
ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကုန်ခဲ့ရတယ် ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ကုန်ခဲ့ရတယ် ဒါ့အပြင် အထူးကုကြီးတွေဖြစ်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက်ထိ ကုန်ရအုံးမယ်ဆိုတဲ့ လောဘဇော တွေကပ်နေတဲ့ ဆရာဝန်တွေ(မျက်စိအောက်မှာတွေ့နေတဲ့ ဆရာဝန်ပေါက်စတော်တော်များများ)က ခပ်များများဆိုတော့လည်း ဆေးကုခံရတဲ့ လူနာတွေအတွက်တော့ နစ်နာစရာတွေကြည့်ပါပဲ..။ အခုလို စေတနာ အပြည့်နဲ့
ကုသပေးနိုင်တဲ့ တန်ခိုးရှင်တွေလည်း မြန်မာပြည်မှာ အများအပြားပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ...
ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းတာပဲ .. အဲလို စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ တန်ခိုးရှင်တွေ များများလိုအပ်တယ်နော် ..း)
Ashin janeya said...
သဘောကျလို့ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်၊ အဓိကတော့လူပီသမှူ့ နဲ့ မေတ္တာ၊ကရုဏာကိုဖော်ကျူးထားတာပါ။
ဖတ်ပြီး ပီတိတွေကူးစက်သွားတယ်....း)